Na-eme nnyocha mere ka ndị mmadụ na kọmputa ruo na nzuzo anwa gaa weebụsaịtị na e chere na a ga-egbochi site repressive ọchịchị.
Na March 2014, ndị nnyocha oru encore, a usoro na-enye ezigbo oge na zuru ụwa ọnụ nha nke Internet nnyocha. Iji ghọta otú ọ na-arụ ọrụ, ka na-eche banyere ya na onodu nke onwe gị webpage (ma ọ bụrụ na ị na-adịghị otu onye, ​​ị pụrụ iche n'echiche enyi gị). Otu ụzọ na-eche banyere gị webpage bụ dị ka a programmụ kọmputa dere HTML asụsụ. Mgbe onye ọrụ ẹyak gị na ebe nrụọrụ weebụ, ya na kọmputa Downloads gị HTML usoro na mgbe ahụ sụgharịa ya na ya na ihuenyo. N'ihi ya, gị webpage bụ usoro ihe omume na-ike-eji ndị ọzọ na kọmputa na-eso ụfọdụ tent nke ntuziaka. Ya mere, ndị na-eme nnyocha, Sam Burnett na Nick Feamster, bụ ndị nọ na Georgia Tech, ume website nwe iji wụnye a obere koodu snippit n'ime ha webpages:
Ọ bụrụ na ị gara a webpage na a koodu snippit n'ime ya, ebe a bụ ihe ga-eme. Mgbe ihe nchọgharị weebụ gị na-rending na webpage, koodu snippit ga-eme ka gị na kọmputa ịgbalị ịkpọtụrụ a website na-eme nnyocha e nlekota oru. Dị ka ihe atụ, ọ pụrụ ịbụ na website nke a machibidoro na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọzọ ma ọ bụ na-akpagbu òtù okpukpe. Mgbe ahụ, gị na kọmputa ga-akọ azụ ka na-eme nnyocha banyere ma ọ bụ ike ịkpọtụrụ ndị nwere egbochi website (ọgụgụ 6.2). Ọzọkwa, ihe a niile ga-abụ nke anya gị ọ gwụla ma ha enyocha HTML isi iyi faịlụ gị webpage. Dị otú ahụ adịghị ahụ anya-atọ ndị ọzọ page arịrịọ ndị bụ n'ezie ezi ọsọ na weebụ (Narayanan and Zevenbergen 2015) , ma ha adịkebeghị abuana doro mgbalị tụọ nnyocha.
Ọgụgụ 6.2: schematic nke nnyocha imewe nke encore. The si malite website eziga gị a webpage dere HTML na obere koodu snippet agbakwunyere na ya (nzọụkwụ 1). Kọmputa gị sụgharịrị webpage, nke-akpali mmesho ọrụ (nzọụkwụ 2). Gị na kọmputa na-agbali iji nweta a mmesho iche, nke nwere ike ịbụ website nke a machibidoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị otu (nzọụkwụ 3). A onye nnyocha, dị ka a ọchịchị, nwere ike mgbe ahụ na-egbochi gị ịnweta mmesho lekwasịrị (nzọụkwụ 4). N'ikpeazụ, gị na kọmputa na-akọ ihe ndị a arịrịọ ka na-eme nnyocha (bụghị ka e gosiri na ọgụgụ). Ọgụgụ site Burnett and Feamster (2015) .
Nke a na obibia nwere ụfọdụ dị mma oru Njirimara maka ịtụ nnyocha. Ọ bụrụ na ezuru weebụsaịtị ịgbakwunye nke a koodu snippit, mgbe ahụ, ndị nnyocha ahụ ike inwe a ezigbo oge, zuru ụwa ọnụ-ọnụ ọgụgụ ọtụtụ nke nke weebụsaịtị na-enyochakwa nke mba. Tupu launching ngo, ndị na-eme nnyocha na edunye na IRB na Georgia Tech, na IRB jụrụ nyochaa oru ngo n'ihi na ọ bụghị "ụmụ mmadụ na-achị research" n'okpuru Common Ịchịisi (-ajụkarị Ọma ahụ bụ ndị set nke iwu na-achị kasị Federally-kwụrụ ụgwọ research na US; maka ozi ndị ọzọ, hụ Historical Odide Ntụkwasị na njedebe nke isiokwu a).
Adịghị anya mgbe encore na oru Otú ọ dị, ndị na-eme nnyocha e kpọtụụrụ Ben Zevenbergen, mgbe ahụ, a gụsịrị akwụkwọ na-amụrụ, bụ onye zụlitere ajụjụ banyere ụkpụrụ ọma nke oru ngo. Karịsịa, e nwere otu nchegbu ndị ahụ ndị nọ ná mba ụfọdụ nwere ike gụrụ n'ihe ize ndụ ma ọ bụrụ na ha na kọmputa nwara ileta ụfọdụ mmetụta ọsọ ọsọ weebụsaịtị, na ndị a ndị mmadụ, bụ ndị a gụrụ ize ndụ kweghị isonye na ọmụmụ. Dabere na mkparịta ụka ndị a, na encore otu gbanwetụrụ ngo ka naanị agbali iji tụọ nnyocha nke Facebook, Twitter, na YouTube n'ihi na atọ ndị ọzọ na-agbali iji nweta saịtị ndị a na-ahụkarị n'oge kwesịrị weebụ nchọgharị (eg, bụla webpage na a Facebook Dị ka Button -akpali a-atọ ndị ọzọ arịrịọ ka Facebook).
Mgbe obon data na iji ju imewe, a akwụkwọ na-akọwa ụkpụrụ na ụfọdụ na-arụpụta na-rubere SIGCOMM, a prestigious kọmputa sayensị ogbako. Ihe omume kọmitii ụtọ maka ihe a oru onyinye nke akwụkwọ, ma kwupụtara nchegbu banyere enweghị ụbụrụ bụ site sonyere. Mee elu mee ala, ihe omume kọmitii kpebiri-ebipụta akwụkwọ, ma na a bịanyere aka n'akwụkwọ nkwado na nkwupụta ekwupụta usoro ziri ezi nchegbu (Burnett and Feamster 2015) . Ndị dị otú ahụ a bịanyere aka n'akwụkwọ nkwado na nkwupụta elitụbeghị n'ihu na SIGCOMM, na nke a emewo ka ndị ọzọ arụmụka site na kọmputa ndị ọkà mmụta sayensị banyere ọdịdị nke ụkpụrụ ọma na ha research (Narayanan and Zevenbergen 2015) .